Unofanirwa Kuvaka kana Kutenga Yako Inotevera Yekushambadzira Platform? | Martech Zone
China, Gumiguru 16, 2014 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Munguva pfupi yapfuura, ini ndakanyora chinyorwa ndichiyambira makambani kwete kuitisa yavo vhidhiyo. Paive nekumwe kudzoserwa pairi kubva kune vamwe techies ainzwisisa ma ins nekubuda kwevhidhiyo yekugamuchira. Ivo vaive nemapoinzi akanaka, asi vhidhiyo inoda vateereri, uye mazhinji emapuratifomu akaitirwa anopa izvo chete. Saka iko kusanganiswa kwemutengo webandwidth, kuomarara kwehukuru hwechiso, nekubatanidza, kuwedzera kune kuwanikwa kwevateereri zvaive zvikonzero zvangu zvekutanga.
Izvi hazvireve kuti handitendi kuti makambani haafanire kutora nguva yakareba achivaka mhinduro yavo. Panyaya yevhidhiyo, semuenzaniso, makambani mazhinji mahombe akabatanidza yavo vhidhiyo zano ne digitaalinen aseti manejimendi hurongwa. Inoita njere yakakwana!
Makumi gumi apfuura apo simba remakomputa raidhura zvakanyanya, bandwidth yaidhura, uye budiriro yaifanirwa kuitwa kubva pakutanga, zvaisazove zvishoma kuzviuraya kwekambani kuyedza kuvaka mhinduro yayo yekutengesa. Iyo Software seSevhisi vanopa vakashandisa mabhirioni muindastiri kugadzira mapuratifomu ayo anogona kushandiswa nevazhinji vedu - saka nei iwe uchiita mari iyoyo? Pakanga pasina kudzoka pairi uye iwe uchave nerombo rakanaka kana iwe wakamboibvisa pasi.
Nekukurumidza kumberi kusvika nhasi, zvakadaro, uye komputa simba uye bandwidth yakawanda. Uye kusimudzira hakufanirwe kuitwa kubva pakutanga. Kune akasimba anokurumidza ekuvandudza mapuratifomu, makuru data dhata mapuratifomu, uye ekuzivisa injini izvo zvinoita kuti kuwana chigadzirwa kumusoro kusadhura uye nekukurumidza. Pasina kutaura huwandu hwakawanda hweasina kudhura API (application programming interface) vanopa kunze pamusika. Anogadzira mumwe chete anogona kukwidza puratifomu ine canned Administrative interface uye kubatanidza kune API mune imwe maminetsi.
Nezvikonzero izvi, isu takadzosa chimiro chedu muzviitiko zvakawanda. Mienzaniso yakati wandei yandinoda kugovana:
CircuPress - Pandakanga ndichitsikisa tsamba yangu kune makumi ezviuru zvevanyori, ini ndanga ndichishandisa mari yakawanda kumubatsiri weemail pane zvandaitowana mubhadharo wesaiti. Nekuda kweizvozvo, ini ndakashanda neshamwari yangu kugadzira email yekutengesa chikuva chakabatanidzwa zvakananga muWordPress. Kwemadhora mashoma mwedzi wega wega, ndinotumira mazana ezviuru emaimeri. Rimwe zuva tichazviburitsa kune wese munhu!
SEO Dhata Miner - DK New Media yakanga iine muparidzi akakura kwazvo aive nemakumi mashanu emamirioni emazwi akakosha aifanira kuteedzerwa munzvimbo nenzvimbo, nemuchina uye nemusoro wenyaya. Vese vanopa kunze uko vangatarisana neizvi vaive mumadhigiramu mashanu epamusoro ekupa marezinesi - uye hapana kana mumwe wavo anogona kubata vhoriyamu re data ravanaro. Zvakare, ivo vane yakasarudzika saiti dhizaini uye bhizinesi modhi iyo isingakwane mune yakakoshwa chikuva. Saka, pamutengo werezinesi mune imwe software, isu takakwanisa kugadzira chikuva chakanangana nemhando yavo yebhizinesi. Yese mari yekudyara yavanogadzira haisi yekudyara mune rezinesi ivo vanozoenda kure kubva - iri kusimudzira chikuva chavo uye ichiita kuti inyatsoita basa mukati. Ivo vari kuchengetedza yakakosha ongororo uye yekugadzirisa nguva nesu nekuvakira chikuva chavo.
Agent Sauce - yakagadzirirwa pamusoro pemakore gumi apfuura neshamwari yangu, Adam, iyo Agent Sauce chikuva iunganidzwa izere yemamojuru - kubva pawebhu, kupurinda, email, nhare, kutsvaga, zvemagariro, uye kunyangwe vhidhiyo. Adhamu aigara achishandisa masevhisi eemail uye aive nenguva yakaoma kushanda akatenderedza zvipingamupinyi zvehurongwa, saka akazviitira zvake pachinzvimbo! Iye zvakare anopa masimba papuratifomu yake nemaAPI mazhinji, achipa mhinduro isingadhuri iyo ingave mazana kana zviuru zvemadhora mune chero imwe indasitiri. Agent Sauce ikozvino inotumira mamirioni emaemail uye makumi ezviuru emameseji mameseji emapeni padhora. Adam ave kukwanisa kupfuudza mari idzodzo akananga kune vatengi vake.
Iyi ingori mienzaniso mishoma uko, pachinzvimbo chekupa marezenisi chikuva chakajairwa nemipimo yakanyanyisa, mhinduro idzi dzakavakwa mugore, uye dzimwe nguva dzakashandiswa zvakanyanya maAPI akasimba. Iwo ekushandisa maficha akagadziridzwa akananga kune kunyorera uye mushandisi, uye maitiro acho akagadziridzwa kuve nechokwadi chekuti vashandisi vanogona kuita zvese pasina toni yenguva yakashandiswa kupuruzira dhata kana kushanda kwakatenderedza nyaya dzepuratifomu.
Usatorere pasi Iyo Kuedza Kuvaka
Kune akasarudzika. Neimwe chikonzero, makambani mazhinji anosarudza kuvaka yavo vega Content Management System uye inoshanduka kuva hope dzehusiku. Ndiko nekuti ivo vanokoshesa kuwanda kwebasa kwazvinotora uye huwandu hwezvinhu izvo iwo masisitimu chaizvo ane izvo zvinoita kuti kugadzirise saiti yekutsvaga uye enhau enhau zvive nyore. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo pakuongorora chikuva chaungave usina ruzivo nacho. Semuenzaniso, patakavaka yedu yega sevhisi sevhisi, isu tanga tatova nyanzvi pane kuendesa email uye kuendesa… saka isu takatora izvo zvese zvimwe zvekufunga mukutarisa.
Iko kugona ndiko iko iko kusevha kuri kumakambani. Iwe ungangoda kutarisa mune izvi paunenge uchiongorora bhajeti yako. Iko kupi kwako kukuru marezinesi emari? Mari yakadii iwe inoita iwe kuti ushande uchitenderedza kukwana kwemapuratifomu iwayo? Imhandoi yemari yekuchengetedza pamwe nekubudirira iyo kambani yako yaizoona kana chikuva chakavakirwa kuti chikwanise zvaunoda pane kuita chikamu chese chemusika? Kana iwe ukashandisa mari yekupa marezinesi mukusimudzira gore rega rega, nekukurumidza sei iwe waungave nepuratifomu yaive tsika uye iri nani pane mhinduro dzemusika?
Ino ndiyo nguva yekutanga kufunga kuti uchaenderera mberi nekutenga mhinduro yemumwe munhu, kana kuvaka hunyanzvi hwaunoziva iwe kuti ungatsika gasi naro!
Tags: muto mutoAPIkuvaka email chikuvakuvaka kana kutengakuvaka seo chikuvamutengo wekuvandudzamutengo wevaridzimari yekuvandudzakusanganamuridzi mari
Zvikonzero Nei CEO Wako Achifanira Kuva PaSocial Media